ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): တရား စအားထုတ်ခါစ ယောဂီများအတွက်
၀တ္ထုတွေ ကျုပ်တို့ ဖတ်ဖူးမှာပေါ့ဗျာ။ ၀တ္ထုထဲမှာ တခါတည်း မြုပ်ပြီးတော့ ၀င်သွားတာတွေ မရှိဘူးလား? စိတ်ဝင်စားတာကိုးဗျ။ တစ်သံသရာလုံးက အပယ်ရောက်ကြောင်း စိတ်ဝင်စားခဲ့တာတွေ များတာကိုး။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။
အဲ…တရားကို စိတ်ဝင်စားရမယ်။ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ တရားဟာ မိမိကို ရည်ညွှန်းပြီးတော့ မိမိ မျက်နှာကို မြတ်စွာဘုရားက တည့်တည့်ကြီးကို ကြည့်ဟောနေသလို ဒီလိုကို စိတ်ဝင်စားရမယ်…ဟုတ်လား။ အဲဒီလို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခါကျတော့ မေဃိယက မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ တရားနောက် တခါတည်းပါသွားတယ်။ သြော်…ဟုတ်လိုက်တာ။ နားကလည်းပဲ တရားကိုနာတယ်၊ ဉာဏ်ကလည်းခန္ဓာကိုလှည့်တယ်။ ဒါကရင့်ကျက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့။
ဒီနေရာမှာ ချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ယောဂီတွေက နားကတရားနာ၊ ဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်။ ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့။ ဒါ ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောထားတာ မှန်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ရဟန္တာကြီးပဲ။ မှန်ကန်တဲ့တရားပဲ။ သို့သော်လည်းပဲ ဦးဇင်းဆိုလိုတာက အတွေ့အကြုံ အခုမှ စခါစဆိုရင် ဉာဏ်လှည့်လို့ လွယ်ပါ့မလား။ အဲ…ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ် ချင့်ချိန်ပါ။
ဆရာတော်ကြီးတွေက အကုန်လုံး တရားရနေတော့ ဟုတ်တာ မှန်တာတွေပဲ ဟောတာ။ အမှန်တွေပဲ။ သို့သော်လည်းပဲ ကိုယ်ကအခုမှ သမာဓိလည်း ကျကျနနမရှိ၊ သတိလည်း ကောင်းကောင်းမရှိသေးဆိုရင် ဆရာတော်ကြီးတွေ ဘာဟောသလဲ။ အဲဒီဟောတာကို မှတ်မိအောင် သေသေချာချာနာအုံး။ ထပ်ခါထပ်ခါနာလို့ မှတ်မိသွားပြီ၊ တရားအားထုတ်တာလည်းပဲ လနဲ့နှစ်နဲ့ အရှိန်ရလာပြီဆိုတော့ ဟော…ဆရာတော်ကြီး ဟောတာအမှန်ပဲ။ နားကတရားကိုနာ၊ ဉာဏ်က ခန္ဓာကိုလှည့်။ အဲဒီလို တရားနာရင်းနဲ့ကို တရားထူး၊ တရားမြတ်တွေ ရသွားနိုင်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့  သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဘယ်လောက် အားကောင်းသလဲ? ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်ရင် မသိနိုင်ဘူးလား သူတော်ကောင်းတို့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ဟန်မဆောင်ကြနဲ့။ သူများကိုတော့ လိမ်လို့ရမယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ လိမ်လို့မရဘူး။ ကိုယ်က အားမကောင်းသေးဘဲနဲ့ သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် တရားလည်းကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူး။
တချို့ က တရားဟောနေကာမှ ရှုးရှဲရှုးရှဲ လုပ်နေတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေ တရားဟောနေတာတောင် ရှုးရှဲရှုးရှဲ တရားမှတ်နေတယ်။ တရားမှတ်နေတော့ ဘာဟောမှန်းမသိတော့ဘူး။ တရားဆိုတာ အစကတည်း ဆက်စပ်ပြီးတော့ ယူရတာမဟုတ်လား သူတော်ကောင်းတို့။
အဲ…ဉာဏ်ရင့်ကျက်သွားတော့ ရှုပါ။ တရားလည်းနာ၊ တရားလည်းရှု။ တရားလည်းနာ၊ တရားလည်းရှု။ ဒီတရားတွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ဒီမှာနှစ်နဲ့ချီပြီး တရားနာဖူးတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။ နှစ်နဲ့ချီနာထားတော့ အကုန်လုံးသိနေတယ်။ ဝေါဟာရလေး၊ ဘာလေး နည်းနည်းလေး ဇာတ်လမ်းလေး ကွဲတာပဲရှိတယ်။ သြော် ဒီသဘော ဆိုက်တာပဲ။ ဘိတ်ဆုံးကျတော့ သစ္စာလေးပါး ပြန်ဆိုက်တာပဲ။ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနဲ့ ဟောကြားနေတဲ့ ဆရာတော်ဘုရားတွေလည်း ဘ်ိတ်ဆုံးကျ ဖောင်းပိန် ပြန်ဆိုက်တာပဲ။ သတိပဋ္ဌာန်ဆိုက်တာပဲ။ အထိုက် အလျောက်သိနေတော့ တရားလည်းနာ တရားလည်းရှုလို့ရတယ်။
အခုမှ စခါစ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ တရားကို သိအောင်နာပါ။ ဒီလိုဆိုလိုပါတယ် နော်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့  သြ၀ါဒကိုလည်း မပစ်ပယ်ပါဘုး။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့  ခြေအစုံကို အမြဲတမ်းရှိခိုးနေတာပဲ။ အဲဒီတော့ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်။ မိမိခန္ဓာကိုယ်အင်အား၊ သတိ၊ သမာဓိအား ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ရှိရင်ရှိသလို သုံးရမယ်။